यस चित्रकला "नाश्ता aristocrat" Fedorov। तस्विर विवरण
हास्य र व्यंग्य हाम्रो जीवनमा एउटा विशेष स्थान कब्जा। (रूपमा राम्रो र खराब, cynical तरिका) कसैले खिसी गर्न इच्छा लगभग जो कोहीले मा निहित छ। कला कुनै अपवाद छ। कवि, लेखक, कलाकार र अन्य रचनात्मक पेशों प्रतिनिधिको पनि हास्यास्पद र निरर्थक, दैनिक जीवनमा नयाँ रंग बनाउन सक्छ कि वरिपरि आफ्नो ध्यान। यस्तो मनसाय को सान्दर्भिकता धेरै वर्ष पहिले समुदाय को सांस्कृतिक जीवनमा स्थान लियो।
रूसी satirical चित्रकला मा एक विशेष ठाउँ पावेल Andreevich Fedotov ओगटेको छ। "नाश्ता aristocrat" - एक तस्वीर, को चित्रकार को सबै भन्दा प्रसिद्ध र चिन्न पनि काम छ जो लेखकको नाम "छैन समय अतिथि मा" अन्तर्गत पनि जानिन्छ।
जीवन र कलाकार को भाग्य
पावेल Andreevich Fedotov मास्को मा जुन 22 (जुलाई 4th), 1815 मा जन्म भएको थियो। आफ्ना पिता एक सेवानिवृत्त अधिकारी थियो र मास्को परिषद decorum सेवा गरें। 1826 मा पावलले मास्को Cadet कोर को एक चेला बने सम्मान संग स्नातक र त्यसपछि सेन्ट पीटर्सबर्ग फिनल्याण्ड रेजीमेंट 10 वर्ष सेवा गरे। एकै समयमा उहाँले कला को रेखाचित्र वर्ग एकेडेमी संलग्न थियो र चाँडै उहाँले आफ्नो प्रतिभा गर्न साँघुरो सर्कल धन्यवाद मा ज्ञात र आफ्नो ब्रश regimental विधा स्केचहरू, चंचल, रोमान्टिक रेखाचित्र, साथै सँगी सिपाही चित्रहरूले अन्तर्गत देखि उदीयमान भयो। आफ्नो काम मात्र सँगी सिपाही को अनुमोदन, तर पनि सम्राट को परिवार, सिंहासन, ग्रैंड ड्यूक अलेक्जेन्डर Nikolaevich गर्न विशेष गरी हकदार प्राप्त गरेको छ। विशेष दुई चित्रहरु आफ्नो अर्डर द्वारा लिखित थिए।
1844 मा स्नातक, सेवा पछि, Fedotov लेखन आफूलाई समर्पित गर्ने निर्णय गरे र एकेडेमी, अर्थात् कक्षा भ्रमण गर्न जारी युद्धमा चित्रकला। मात्र जो चित्रकला 1850 मा लिखित "नाश्ता aristocrat" समावेश आधुनिक जीवनको एउटा नैतिक-महत्वपूर्ण दृष्य, रूपमा, तर त्यो छैन उसलाई रुचि थियो, र चाँडै कलाकार, घनिष्ठ विधा मा काम गर्न उत्प्रेरित उहाँलाई भनिन्छ। दुई वर्षअघि 1848 मा, त्यो आफ्नो काम कार्ल Pavlovich Briullov, जो तिनीहरूलाई उच्च अंक राख्दछ र कडा Fedotov समर्थन देखाउँछ।
यसको छोटो जीवनमा पावलले ए विधा चित्रकला को उदाहरण र समकालीन समाज को सुअवसर strata जीवन को सारा सार बनाउन मजा भएका छन् कि चित्रहरू सिर्जना गरियो। उहाँले 14 (26) नोभेम्बर 1852 मा मानसिक रोग को exacerbation पछि मानसिक बिरामी लागि क्लिनिक मृत्यु र सेन्ट पीटर्सबर्ग मा स्मोलेन्स्क चिहान मा गाडे।
रचनात्मकता पावेल Fedotov
माथि उल्लेख गरिएझैं कलाकार द्वारा काम मुख्य विधा एक घर भयो। 1846 मा उहाँले को प्रविधी मास्टर गर्न थाले तेल चित्रकला क्यानभास मा काम को प्रक्रिया मा "ताजा Cavalier।" एक वर्ष पछि, पावलले ए उहाँले शिक्षाविद् को शीर्षक bestowed थियो जसको लागि "choosy दुलही", चित्रित र शरद ऋतु 1848 मा घरेलू दृश्य कलाकार बीच उहाँलाई पहिलो स्थान ल्याएको जो चित्रकला "Courting मेजर", ज्योति देखे।
1850 (मई फरवरी) मा Fedotov जहाँ सेन्ट पीटर्सबर्ग मा सुरु काम जो मा, चित्रकला "नाश्ता aristocrat" पूरा गरिएको छ मास्को, थियो। पछि क्यानभास प्लट जो को मृत्यु प्रेरित थियो "विधवा", लेखे उनको श्रीमानको बहिनीका एक कलाकार। आफ्नो काम अन्तिम "दोहराना, दोहराना!" अनि "खेलाडी" थिए। कि पछि, स्वास्थ्य मा काम गर्ने अनुमति छैन, तर यो सिर्जना गरिएको थियो भन्ने तथ्यलाई, रूसी चित्रकला को इतिहास मा आफ्नो चिन्ह बाँकी छ।
माथि उल्लेख गरिएझैं 1850 मा कलाकार आफ्नो सबै भन्दा प्रसिद्ध चित्रहरु एक स्नातक "नाश्ता aristocrat।" यस चित्रकला Fedotova, "Courting मेजर" को शानदार सफलता पछि लिखित, satires प्रेरित थियो, जसको नाम लेखक अज्ञात बने (संभाव्यतः, यो एक जवान लेखक इवान Goncharov त थियो): "अनि तपाईं गल्ति घर जस्तै मान्छे आउन प्रयास भने र तिनीहरूलाई फेला अचम्म? "म यो कलाकार धेरै नजिक थियो, र सजिलो पक्कै पूर्णतया यो कथन लागू भएको थियो। तर, चित्रकार को प्रलोभन बोलिहाल्यौं होइन, र यो अघिल्लो क्षण कब्जा।
चित्रमा हामी के देख्न?
पक्कै, विश्लेषण, पावलले Fedotov लेखे जो सबैभन्दा चिन्न चित्रहरू, एक मा के चित्रण गरिएको छ योग्य "एक aristocrat को नाश्ता।" सबैभन्दा ज्वलन्त रंग चित्र मा को विवरण कलाकार आफ्नो रचनात्मकता मार्फत पूरा भएको थियो के अनुरूप। यो आफ्नो सबै manifestations मानव भरिएको ridiculing।
यस चित्रकला देख, हामी हेर्न एक जवान nobleman, आफ्नो बिहान भोजन को सबै छ कालो रोटी, को आवारागर्दी ~ कवर डरा, जब पाइला विना अधिकार घुस्ने व्यक्ति को ध्वनि। नायक आसपास हरेक विस्तार मा एक कलाकार जारी छ लेआउट: तालिका अन्तर्गत कार्ड, जुवा गर्न इशारा को मुद्रित डेक अन्तर्गत एक बक्स; कवर सरल नास्ता पुस्तक, जो प्रकाशित उपन्यास को समयमा फैशन मध्ये; विज्ञापन पोस्टर र कुर्सियों मा राखिएको नाटकीय प्रदर्शन Oysters (अन्तिम यात्रा समय सांसारिक युवा लागि अनिवार्य सोख थियो); dandified लाउने गाउन, नवीनतम पेरिस फैशन मा सिलना।
तर सबै भन्दा सुवक्ता तत्व, जो पूरा गर्न सकिँदैन तस्वीर विवरण Fedotova "नाश्ता aristocrat" - पूर्ण खाली र पर्स बाहिर भित्र गरियो। मानव व्यर्थ, व्यर्थ, ostentatious जीवन, ध्यान बाह्य राम्ररी गर्दा अनि चम्कने को गरिबीको मास्क अन्तर्गत लुकेको: आफ्नो विशेषता तरिका मा कलाकार त तिनीहरूलाई र congenial शीर्षकहरू प्रेम ridicules। यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ वर्ण Fedotov गरिएका जो कहानी को सान्दर्भिकता बारेमा कुनै पनि शङ्का छोड्न गर्दैन, समय को लागि विशिष्ट थियो क्यानभास प्रदर्शित छ।
हाल, को चित्रकला "नाश्ता aristocrat", कलाकार द्वारा अन्य महत्वपूर्ण काम संग, मास्को मा, Lavrushinsky लेन मा राज्य Tretyakov ग्यालरी मा स्थित छ। समयमा, पावेल Tretyakov, संग्रहालयका संस्थापक, रचनात्मकता Fedotov को प्रारम्भिक अवधि केही दुर्लभ ग्राफिक काम सङ्कलन गर्न सक्षम थियो। आज, तिनीहरूले ग्यालरी संग्रह गरिएका छन्, तर संग्रहालय मा प्रदर्शन छैन। चित्रहरू, पछि मात्र विधानसभा फन्दामा, स्थायी प्रदर्शनी को भाग। यो चित्रकला "नाश्ता aristocrat", यो लेखको विषय बनेको, साथै चित्रहरु "Courting मेजर", लेखकको प्रतिहरू "विधवा", "ताजा Cavalier" र एक "intelligibility दुलही।"
रूसी चित्रकला मा मूल्य सिर्जना पावलले Fedotov
जो महत्त्व आफ्नो काम प्रतिबिम्बित छ, कलाकार, overestimate गर्न कठिन छ। उहाँले ठीकै एक रूप दृश्य कला मा यो विधा को संस्थापक भनिन्छ महत्वपूर्ण यथार्थवाद। यो रचनात्मक विकास को प्रक्रिया मा सुरुमा उहाँलाई peculiar म थप सरल र प्राकृतिक तरिका सारियो भागहरु को धेरै संग गीतहरू ढेर। आफ्नो चित्रहरु दृढ अन्य युवा कलाकारहरूको काम को लागि जमीन दिनुभयो जो राष्ट्रिय रंग, संग satirical चित्रहरु नयाँ विधा को कला मा निहित छन्।
समकालीन चित्रकला। समकालीन कलाकारहरूको परिदृश्य
कसरी खेल Minecraft Creeper आकर्षित गर्न
एक कान कट भ्यान Gogh बारेमा कथा
कसरी पेन्सिल खेलाडी आकर्षित गर्न
बच्चाहरु को लागि "Azithromycin": निर्देश पुस्तिका, समीक्षा
कुल कार्यालय स्थान: फाइदा भन्दा बढी किन बेफाइदा
को स्थिर र मोबाइल सिक्ने उहाँ सम्झनुहुन्छ: फोन बारेमा पहेली
Mar Belaya बिरुवाहरु: वर्णन, गुण र खाना प्रयोगको
शानदार रंग कपाल खैरो कपाल
स्मोक डिटेक्टर - सुरक्षा आवास
Photoshoot: प्रेम कथा लागि विचार
Quatrain: यो के हो?
शारीरिक पूर्णता - यो शरीर को सौन्दर्य र स्वास्थ्य छ